Wacyi la’aanta ummadeed: Sidee xal loogu heli karaa?
Wacyi la’aantu waa cudur ku dhaca ummad ama bulsho meel ku dhaqan, waxaana lagu ogaaday sooyaalka ummaddaha burburay in cudurkani uu halis ku yahay jiritaanka umadaha uu haleelo, igu danbayna sabab u noqdo burburkooda. Culimada ku xeeldheer cilmiga bulshada ayaa waxay mataaneeyaan cudurka qofka ku dhaca ee waalida iyo kan bulshooyinka ku dhaca ee wacyi darrada ummadnimo, waxayna doodoodu tahay in labadan cudur wadaagaan hal qeexitaan oo ah ”Qof ama bulsho ka dhacsan fahanka xaaladda ay ku noolyahiin iyo duruufaha ku xeeran”, taa oo ugu danbayntii dhaxalsiisa inay ku fashilmaan qaabkii ay ula jaanqaadi lahaayeen dunida ku heeran. Waxaa intaa sii dheer in falalka ka dhaca ummaddaha wacyi darradu haayso, ay ka dhici karaan oo kaliya qof waalan. Waxayse ku kala duwan yahiin waalida qofka waxaa lagu ogaadaa shaybaarada xarumaha caafimaad, halka wacyi la’aanta lagu garto qiimayn cilmiyeysan oo lagu sameeyo hab dhaqanka bulshadeed ee ummadda.
Haddaba haddii ummad wacyi la’aan ekayso, waxaa u caado ah in ay fashalka iska leexiyaan oo ay u saariyaan awooddo kale iyo duulal aanan la garanayn, maxaa yeelay ma hayaan waddo kale oo ay ku sharxaan haddii la waydiiyo mashaakilka haysta, mararka qaarna waxaaba dhacda inay fashalka u duwaan dhanka Ilaah (S W), iyaga oo hadalhays ka dhigta in waxa ummadda haysta yahay masiibo Ilaah u keenay, ayna tahay astaamahii akhiru-sabaankii. Sidoo kale waxay samaystaan tababo, xeelado iyo luqado ay uga baxsadaan xaaladda dhabta ah ee taagan, waxayna taa ka dhax muuqan kartaa dhinacyada siyaasadeed ee isku hayo talada Soomaaliya oo kale ah:-
1-Dowlado Ku-beel Gaar ah : ku dhawaaqid dowlado ku-beel gaar ah, waa tabtii ugu horeysay oo ay Soomaalidu isku dayeen inay uga dabaashaan dhibaatada taagan, iyaga oo iska dhaadhicinaya si wacyi la’aani ku dheehantahay in xalka ummadda Soomaaliyeed lagu yegleeli karo qabyaalad iyo kala ququbka ummadda walaalaha ah, waxaana looga golleeyahay in lagu quusiyo tiro yar oo Soomaalinimo wali ku danbayso, looguna diyaariyo gayiga Soomaaliyeed xaaladdihii uu ku jiray qarniyadii gumaysiga iyo xilliyadii Itoobiya ku amar taaglayn jirtay Soomaaliya. Qorshaha qabiilaystayaasha oo ay ku taagantahay dowlada ku-beel gaarka ah waxuu u gogol xaarayaa in Soomaaliya ku laabato gacanta Itoobiya, mana lahaan karto ujeeddo kale oo intaa ka dheer.
2-Kooxo Imaarado doon ah: Magacan ayaa waxaan ugu yeerayaa kooxo wadaadada ka mid ah, oo Soomaaliya intii ay dowlad la’aanta ahayd, ka sameeyay qaybo ka mid ah dhulka Soomaaliya waxa ay ugu yeereen “Imaarado Islaami ah”. Kooxdan ayaa iyaduna samaysatay xeelado ay uga fasax qaataan fahmidda dhibaatada ummaddooda ku habsatay, hase ahaatee; qoorta gashaday xal u helidda qadiyadaha haysto in ka badan bilyan muslimiin ah oo ku nool qaaradaha dunida.
Kooxdan ayaanan waxba ka duwanayn kuwo hore, haddii aanu ku fiirino diiradda xal u raadinta Soomaaliya, oo haddii aan hanka qabiilaystaha ku dhaliilnay inuu yahay mid ka hooseeya himilada ummadnimo , kuwana waxaan ku dhaliilaynaa in hankoodu aanu xuduuda lahayn, oo aan la gaari karin, isla markaana ka dhacsan yahay aqrinta dunida aynu maanta joogno.
Luqadda: Ujeedada aan uga golleeyahay luqadda, ayaa ah in luqaddu tahay qaab kooxaha siyaasadda isku hayo mid walba uga dhuumato xaaladda murugsan ee ay abuurtay, kuna qurxiso falalka fooshaxun ee ay maalin walba kula kacaan shacabka Soomaaliyeed, waxayna koox walba ku guda-jirtaa qorista qaamuus cusub oo luqadeed. Qalabka isgaarsiinta ayaanu ka helnay qaar kamid ah eraybixino cusub oo ay ku soo biiriyeen luqada Soomaaliga:
Qaamuuska Ku-beel Gaar ka :
Dowladda ku-beel gaarka ah: Dowladda Ku-meel Gaarka ah
Qalqal abuurid: Amaan sugid
Gumaad shacab: Sifayn argagixiso
Taliyaha nabad sugudda: Taliyaha colaad ogidda
Ciidamada gumaysiga: ciidamada walaalaha aynu nahay
Duqa magaalada:Taliyaha howl’gallada Ciidamada
Gaajaynta shacabka: ku dadaalista caafimaadkooda.
Qaamuuska Imaarado Doonka:
Baaba’a shacabka: Astaan guul.
Jabka: Xeelad dagaal.
Xaaladda oo ka sii darta: Guusha oo soo dhawaato
Aqoonyahan: Gaalo raac.
Heesta calanka: ficil shaydaan
Calanka Soomaaliya: Maro labo yaardi ah.
Afawarki: Najaashiga qarniga 21aad
Nin xukun raadis ah: Raadin xukun Ilaah.
Haddaba sidee lagu gaari karaa wacyi ummadnimo?
Wacyiga umadnimo oo soo laabto ayaa waxaa saldhig u noqon kara garashada dhaqanka siyaasadeed ee ay soo bandhigeen labada garab ee kor ku xusan iyo sida ay uga gabi dhaceen fakarka ummadnimo, taasina ay keentay in ugu danbayntii ummadda Soomaaliyeed galiyaan dabka dunida ka aloosan ee “la dagaalanka Argagixisada”.
Waxaa jiro dad Soomaaliyeed oo xanbaarsan wacyi ummadnimo hase ahaatee, dhibka haysto uu yahay in mid walba dooddiisii iyo caqligiisii uu la fadhiyo qolkiisa, isla markaana ay noqotay kaalintiisa inuu daawado waxa socdo, kana faaloodo xaaladda isaga iyo ummaddiisa lagu qasbay.
Wacyiga oo soo laabto waa ummadda oo gaarta heer ay tiraahdo “MAYA” labada qorshe ee looga dhuumanayo waajihidda xaaladda dhabta ah ee taagan. “HAA” qorshayaasha danta ummadnimo ku jirto, waxaana bilaaw u noqonkara in la sameeyo xarumo “Doodwadaag ummadnimo” oo ay ku bahoobaan dhammaan dadka leh wacyiga ummaddeed, isla markaana lagu bisleeyo fakar aan ahayn Ku-beel gaar doon iyo Imaarado doon midna, ee ah mid lagu bisleeynayo fakarka ummadnimo doon ah.
Abuurista “Dood wadaag ummadnimo” ayaa dhagax-dhig u noqon kara soo laabasho bulsho leh dhaqan wacyi ummaddeed, dibna u nooleeysa luqadda lagu tuntay, iyaga oo soo celinaya anshaxii ay lahayd luqadda Soomaaliyeed. Doodwadaaga ayaa waxaa ka soo bixi kara luqad kawada dhaxeeyso ummadda, taa oo ugu danbaystii keeni karto ummad isla garata inay dhalato ummad “Dan-wadaag ummadnimo”. Xarumahan ayaa sidoo kale waxaa hubaal ah inay kasoo baxayaan hogaamiyayaal aqoon u leh heerka ummaddoodu marayso iyo sida ugu haboon ee ay uga soo dhalaali karto himilooyinka ummadnimo.
W/Q: C/raxiim C. Shaafici
 “Dowlada-ku-beel gaarka ah” Waa Magaca aan u arko inuu ku haboonyahay Dowladda hada jirto, maadaama lagu soo dhisay in lagu gaaro dan beel.